नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ भदौ २०७५)
on: September 09, 2018 लगानी
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ भदौ २०७५)
८ बैङ्कले जारी गरिरहेको ५० प्रतिशत हकप्रदको मूल्य समायोजनपछि कायम चुक्तापूँजी लिइएको हो र सोही पूँजीका आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी गणना गरिएको हो ।
बैङ्कले भदौ ४ गतेबाट ५० प्रतिशत हकप्रद विक्री खुला गरेको छ । साउन १४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले आगामी असोज ७ गतेसम्म शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सक्ने विक्रीप्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले सङ्केत गरेको छ ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
बैङ्कले यो अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा ५३ प्रतिशत कमी बेहोरेको छ । बैङ्क यो त्रैमासमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ ।
पूँजीवृद्धिसँगै खुद मुनाफामा पनि कमी आउँदा बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानीमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ । सामान्य सूत्रअनुसार एनएफआरएसअनुसार प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लिखित खुद मुनाफालाई शेयर सङ्ख्याले भाग गरेर हेर्दा गतवर्ष ५६ रुपैयाँ २ पैसा रहेको प्रतिशेयर आम्दानी चौथो त्रैमाससम्म १७ रुपैयाँ ६८ पैसा कायम भएको छ ।
बैङ्कले जगेडा कोषमा सञ्चित रकममा १६ प्रतिशत सुधार गर्दै ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सञ्चित गर्न सफल भएको छ ।
बैङ्कले योे त्रैमासमा ६३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ निक्षेप उठाई ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
निक्षेप ८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी ३४ प्रतिशत कम भएर १ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, बैङ्कको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७५ करोड छ ।
बैङ्कको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानीमा ४० प्रतिशत वृद्धि भई ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैङ्कको निष्क्रिय कर्जामा कमी आएको छ । यस अवधिमा बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ८० प्रतिशतबाट कम भएर ३ दशमलव ८९ प्रतिशत पुगेको छ भने बैङ्कले निष्क्रिय कर्जाका लागि ११७ दशमलव ६१ प्रतिशत रकम व्यवस्था गरेको छ ।
बैङ्कले प्रकाशन गरेको चौथोे त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार कोषको लागत ८ दशमलव २७ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ११ दशमलव ९२ प्रतिशत र वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ ।
समीक्षा अवधिमा कोषको लागतमा आएको वृद्धिसँगै खुद ब्याज आम्दानीमा ३४ प्रतिशत कमी आउनाले सञ्चालन र खुद मुनाफामा कमी आएको देखिन्छ । अहिले विक्री गरिरहेको ५० प्रतिशत हकप्रदपछि पनि बैङ्कले रू. ९९ करोडबराबरको पूँजी थप गर्नुपर्छ । अहिले बढेको पूँजी र थप गर्नुपर्ने पूँजीपछि बैङ्कलाई व्यापार विस्तार गर्न, निष्क्रिय कर्जामा कमी ल्याउन र मुनाफा बढाउन चुनौती थपिने देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क प्रतिरोध क्षेत्रमा
प्रतिरोध २ : २११ । प्रतिरोध १ : २०३ । हालको अन्तिम मूल्य : १९६ । टेवा १ : १९४ । टेवा २ : १८३
६ सेप्टेम्बर, २०१८ मा यस कम्पनीको अन्तिम कारोबार मूल्य रू. १ सय ९६ रहेको छ । अघिल्लो दिन पनि यही मूल्यमा बजार बन्द भएको थियो । यस दिन यो कम्पनीको १ लाख ५ हजार ४ कित्ता शेयरको कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा १५ हजार १ सय ६६ कित्ता बढी हो ।
अघिल्लो कारोबार दिनमा बजारले १ सय ९४ दिनको प्रतिरोध तोडेकाले अब यो विन्दु टेवामा परिणत भएको छ । अन्तिम दिनमा बजारले २ सय ५ को उच्च विन्दु बनाए पनि पुनः १ सय ९४ को टेवाक्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।
एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज (ईएमए): छोटो र लामो समयावधिका ईएमएहरू एकआपसमा नजिकिँदै गएकाले यसले बजारमा आपूर्तिभन्दा माग बढेको सङ्केत गर्छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ७० अङ्कमा छ । यसले कम्पनीको शेयर बढी खरीद भएको सङ्केत गरेको छ ।
मैनबत्ती : अन्तिम दिनको मैनबत्तीले लङलेग डोजी आकृति बनाएको छ । यसले बजारको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरे पनि अर्को दिनको मैनबत्तीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिमाण : यो साता लगानीकर्ताहरूको संलग्नता बढेको छ ।
माथि उल्लिखित केही सूचकले फरकफरक सङ्केत गरेको र मूल्यप्रवृत्ति प्रतिरोध क्षेत्रमा रहेकाले अर्को सकारात्मक सङ्केतलाई कुर्नुपर्ने देखिएकाले हाल ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।